Khubaza idatha kuzinketho ze-Android Developer | Izindaba zamagajethi
Ungakhubaza kanjani Izinketho Zonjiniyela ku-Android
Izinombolo ezahlukahlukene zezifundiswa zivame ukuphakamisa kubasebenzisi bedivayisi yeselula ye-Android ukwenza kusebenze umsebenzi owaziwa ngokuthi "Izinketho Zonjiniyela", okuthile okubandakanya ukukhohlisa okuncane uma sifuna ukubona imisebenzi embalwa kule ndawo yokusebenza kohlelo.
Manje, uma singeke sithathe lezi zici noma imisebenzi, kungcono uma kungahlali noma kungasebenzi. Kulokhu sizosebenzisa iqhinga elincane, sidinga kuphela ukufaka ukumiswa kohlelo lokusebenza lwe-Android.
Yenza izilungiselelo kusistimu yokusebenza ye-Android
Icebo lingahle lisebenze kahle kusuka ku-Android 4.0 kuye phambili, yize kuya ngohlobo lwedivayisi esinayo, imisebenzi embalwa ingahluka kusuka kumodeli kuya kumodeli; Ngokuvamile, ukuze kungasebenzi lezi "zinketho zonjiniyela" ohlelweni lwethu lokusebenza lwe-Android, kufanele silandele lezi zinyathelo ezilandelayo:
Qala uhlelo lwethu lokusebenza lwe-Android.
Thinta isithonjana se- «izilungiselelo» noma «olungisiwes ».
Bheka ibha eseceleni yangakwesobunxele.
Kusuka kuzinketho eziboniswe lapho, khetha eyodwa ethi «Aplicaciones".
Khetha kusuka ohlangothini lwesokudla uye ku- «Konke"izicelo.
Buyekeza uhlu olukhonjiswa ezansi.
Uma sesizithola sikulesi simo se izilungiselelo zohlelo lwethu lokusebenza lwe-Android, tSizogcina sibuyekeza ohlwini olukhonjiswe ezansi uhlelo oluthile olunegama le- «ukumisa«; Akufanele udidaniswe negama lalo, ngoba lokhu "ukumiswa" kuthathwa sengathi kungolunye nje uhlelo lokusebenza olufakwe ohlelweni lokusebenza lwe-Android. Uma sikukhetha sizothola esinye isixhumi esibonakalayo, lapho kufanele ukhethe inkinobho ethi «susa idatha«; Umbuzo wobulukhuni uzofika kithi ngaleso sikhathi, ngoba sizoba ndawonye ukuqeda zonke izinhlobo zolwazi olungezinhlelo zokusebenza esizifakile kuselula, ezingaphakamisa okuncamelayo, ukufinyelela amaphasiwedi nabanye abanezici eziningi.
Uma sifuna ukuqhubeka nenqubo, kufanele samukele isenzo esishiwo. Ngalokhu, sizobe sesivele sikhubaze izinketho zonjiniyela yize, njengoba siphakamisile ngenhla, lokhu kungahluka kusuka kumodeli eyodwa kuye kwenye kumadivayisi eselula.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » I-Telephony » AmaSelula » Ungakhubaza kanjani Izinketho Zonjiniyela ku-Android
Sawubona!! Ngiyazenza lezi zinyathelo kepha inketho yokususa idatha ayisebenzi ... angikwazi ukuyikhetha ... ingabe ikhona enye indlela yokwenza? Ngiyabonga
Nginenkinga efanayo, ayingivumeli ukuba ngicindezele «susa idatha» ukuze ngisebenzise imodi yonjiniyela
UJuan Ambrocio Davila kusho
Kuhle ngixazulula inkinga ngiyabonga.
Phendula uJuan Ambrocio Dávila
Ngiyabonga ngayixazulula inkinga.
UMartha Estela Fuentes de Arana kusho
Kuhle kakhulu, bengingakwazanga ukukwenza, ezinye zikhomba izilungiselelo futhi wahamba
olunembile kakhulu. Ngiyabonga
Phendula uMartha Estela Fuentes de Arana
Nginenkinga efanayo, ayingivumeli ukuba ngicindezele "idatha yokususa" ukwenza kungasebenzi imodi yonjiniyela
Ungasikhulula kanjani isikhala ku-iPhone yakho ngohlelo lokusebenza lweMeyili
Ungazisusa kanjani izibuyekezo zika-Agasti eziphakanyiswe yi-Microsoft